Nezvedu - Baoding Mingshuo Magetsi Zvigadzirwa Zvekugadzira Co, Ltd.
1.We tiri mugadziri anopfuura makore gumi R & D uye yekugadzira ruzivo, Pese panenge paine dambudziko reHigh frequency Welding Machine, tinogona kuwana dambudziko nekurigadzirisa, yaisazove inonyadzisa mamiriro ayo vanhu vasingagone kuwanikwa mushure makore mazhinji.
2.Best Mutengo Kutsigira
Inopa mutengo wakanakisa wevadyidzani, uye unoshuvira vamiririri vedu kana vanogovera kuti vawane purofiti yakakura uye kugovana pamusika.
3. Technique & Kutsigira Kwekutengesa
Rimwe gore garandi .Ichapa rutsigiro rwekutengesa senge katarogu yekuzivisa, magwaro ehunyanzvi, mareferensi, anotungamira kuisirwa panzvimbo uye nekudzidziswa kwekugadzira kugadzirwa, zadzisa kutumwa uye rutsigiro rwepamhepo.
4. Kugovera Uwandu Kudzivirirwa
Tinogona kuvimbisa huwandu hwemaodha mumwaka unopisa kana kushomeka. Yako odha ichafambiswa mberi.
5.Trade rutsigiro rwakanaka
Tichatora chikamu mune nyanzvi simbi chubhu inoratidzira nguva dzose, senge International Tube & Pipe Indasitiri Yekutengesa Fair munyika dzakasiyana, kuchinjana nekukurukura zvinhu nezve simbi pombi.
Rudzii rwebasa iro timu yedu inogona kukupa iwe?
Nyanzvi Yekutengesa Chikwata:
Kupa zano rehunyanzvi uye kuraira kune vatengi, kuti ikubatsire kuziva huwandu uye mhando yeSolid state HF Welder inokodzera chako chinodikanwa.
Technical Chikwata Chekutsigira:
Zvese zvehunyanzvi zvinodiwa, zvisinei hazvo kuti hombe kana diki, yedu technical Team inoongorora izvo zvinodiwa uye voita tsananguro mhinduro kune vatengi.We tinotsigirawo zvakagadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Hunhu Kudzora Chikwata:
Chigadzirwa chega chega chichava cheki neChikwata chedu cheKutonga Kwezvinhu, kuve nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvese zvaisazove nerunyorwa runyorwa paMhando Yekudzora Manuel .Zvimwe zvikamu zvemagetsi zvakagadziriswa zvakanyanya kuti zvidzivirire kupisa kwakanyanya uye kumanikidza kwakanyanya.
Mushure mekutengesa Chikwata:
Iri timu rinobata mushure mekutengesa sevhisi yako, ivo vanokurumidza kupa yakadzama mhinduro yemubvunzo kana dambudziko rawanga uchisangana naro.